Maleeshiyada Al-Shabaab oo ku jabay weerar ay ku qaadeen Shabeellaha Hoose!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Maleeshiyada Al-Shabaab oo ku jabay weerar ay ku qaadeen Shabeellaha Hoose!!
Maleeshiyada Al-Shabaab oo ku jabay weerar ay ku qaadeen Shabeellaha Hoose!!
Feb 12, 2017WARAR
Maleeshiyada Argagixisada ah ee Al-Shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday deegaannada Tixsiile iyo Warmaxan halkaas oo ay joogaan ciidamo ka tirsan xoogga dalka.
Dagaalka ay soo qaadeen Maleeshiayada Al-Shabaab ayaa lagu jabiyay waxaana ka soo gaaray Khasaaro badan sida uu SONNA u xaqiijiyay guddoomiyaha Gobalka Shabeellaha Hoose.
Deegaannadaan ayaa haatan waxaa ku sugan ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya oo kaliya, iyadoo maleeshiyaadka weerarka sooqaaday ay baxsadeen markii ay ku jabeen dagaalka.
Dadka deegaanlka ayaa ku waramay in Al Shabaab mudo kooban ay qabsadeen goobaha lagu dagaalamay qaarkood, waxa ayna goob joogayaal ku warameen in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac.
Al Shabaab ayaa sidoo kale intii uu socday dagaalka waxa ay jidka u galeen ciidamo gurmad ugu baxay deegaanada ay dagaalada ka socdeen, waxaana Shabaab qaraxyo iyo gantaalaha garbaha laga tuuray la eegteen ciidanka gurmadka ahaa.
Dowlada Soomaaliya gaar ahaan taliska Milatariga ayaan ka hadlin dagaalkan xoogan ee ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose iyo qasaaraha ka dhashay, mana jiro ilo madax banaan oo xaqiijin kara qasaaraha rasmiga ah ee kala gaaray labada dhinac.
Previous PostDaawo muuqaal: Maxaa keenay Guusha Farmaajo Iyo Wixii Dhacay Doorashada ka Hor ? Next PostDowlada Soomaaliya oo sanadkan Daabaceysa lacago cusub oo Shiling Soomaali ah!!